Muhiimadda xuska Maalinta Badaha Adduunka | Saadaasha Shabakadda
Muhiimadda xuska Maalinta Badweynta Adduunka
Jarmal Portillo | | Saadaasha hawada
Maanta 8-da Juun waa maalinta Badweynta Adduunka. Badduhu waa aasaaska nolosha meeraheenna waana taas sababta aan ugu talo galnay maalin aan ku sameynno rafcaan iyo xusuusin ahmiyadooda. Dhawridda, ilaalinta iyo ku haynta xaaladdooda wanaagsan ayaa muhiimad weyn u leh, labadaba nolosha ku soo koraysa iyaga, iyo annagaba.
Intaas waxaa sii dheer, saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada adduunka oo dhan, badaha waxay leeyihiin saameyn weyn sida aan gadaal ka arki doonno, maadaama ay yihiin kuwa xaaladdo badan oo saadaasha hawada, koror ama hoos u dhaca heerkulka, iwm Ma rabtaa inaad ogaato sababta aan ugu dabaaldegno Maalinta Badaha Adduunka?
1 Ahmiyada badaha ay u leeyihiin nolosha meeraha
2 Maxaan ugu dabaaldegeynaa Maalinta Badaha Adduunka?
3 Muhiimad intee le’eg ayey ku leeyihiin badaha badweynta iyo saadaasha hawada?
Ahmiyada badaha ay u leeyihiin nolosha meeraha
Sababtoo ah baddu waxay dabooshaa seddex meelood laba meel dusha meeraha, muhiimaddiisu waa mid aad u sarreysa, maadaama ay si weyn u saameynayso nidaamka deegaanka iyo jawiga adduunka. Baddu waxay soo saartaa qayb weyn oo ka mid ah oksijiinta aan neefsanno iyo, wixii ka sarreeya, Waxay nuugtaa qadar badan oo ah qiiqa kaarboonka aan ku sii deyno jawiga. Intaas waxaa sii dheer, waxay siiyaan cunno iyo nafaqooyin noolaha ku nool iyo annagaba, iyagu waa xakameeyayaal muhiim u ah cimilada adduunka waxayna dhaqaale ahaan muhiim ugu yihiin dalal badan oo adduunka ah dalxiiska, kalluumeysiga iyo kheyraadka kale ee badda sida saliidda.
Nasiib darrose, muhiimaddan muhiimka ah ee ay baddu u leedahay nolosha meeraha, ayaa ka dhigaysa qofka bini-aadamka ah in uu uga faa'iideysto si aan la xakamayn karin, taas oo keenta cadaadis aad u xoog badan oo keena adeegsi xad dhaaf ah iyo hoos u dhac isku mid ah. Waxaan ka hadleynaa culeyska aadanaha sida kaluumeysiga xad dhaafka ah, kaluumeysiga sharci darada ah, dhaqamada biyaha lagu dhaqo ee aan la sii wadi karin, baabi'inta degaanada badda iyada oo la raacayo ama wasakheynta, soo bandhigida noocyada duullaanka ah ee baabi'iya isla markaana barakiciya dadka asaliga ah, wasakheynta xad dhaafka ah , isbedelka cimilada iyo aashitada badaha oo waxyeelo ba’an geysta.
Maxaan ugu dabaaldegeynaa Maalinta Badaha Adduunka?
Waxaan ugu magac darnay ahmiyada ay bada u leedahay noolaha aduunka oo dhan waana waxa aan dooneyno in aan ilaashano oo aan ilaalino si wax walboo ay ugu sii socdaan sidii loogu talagalay. Waxaan u dabaaldegnaa Maalinta Badaha Adduunka si aan u xusuusano qof walba doorka aasaasiga ah ee badaha ay ku ciyaaraan nolosheena iyo ku dhowaad dhammaan noolaha ku nool meeraha. Xusuusi iyaga in badaha ay soo saaraan inta badan oksijiinta aan neefsanno. Waxay sidoo kale isku dayeysaa inay dadweynaha u sheegto saameynta ay howlahayagu ku leeyihiin iyaga oo markaa kor u qaadaya wacyigelinta iyo wacyigelinta muwaadinka.
Dhinaca kale, waxay isku dayeysaa inay abaabusho oo mideyso dadka adduunka si loo gaaro maareyn waarta oo badaha isla markaana si wadajir ah loogu dabaaldego quruxda, hantida iyo kartida ay leeyihiin.
Muhiimad intee le’eg ayey ku leeyihiin badaha badweynta iyo saadaasha hawada?
Badduhu waa kuwa go’aamiya dhacdooyinka saadaasha hawada ee meeraha oo dhan waxayna saameyn ku yeeshaan cimilada. Biyaha tirada badan ee ku jira badweynta ayaa is weydaarsada kuleylka jawiga waxayna habeeyaan heerkulka adduunka. Waa durdur loo yaqaan suunka xamuulka qaada ama durdurka Thermohaline midka jaangooya heerkulka iyada oo la beddelayo kuleylka laga helo Baasifiga iyo Badweynta Hindiya illaa uu gaaro oo uu ka qaboojiyo Antarctic.
Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa sameynta duufaanno iyo duufaanno, abaaro ama daadad meelaha qaarkood oo meeraha ah. Aynu xusuusano ifafaalaha caanka ah ee "El Niño"Iyo"Gabadha”Kuwaas oo ay shuruudo u leeyihiin dabaysha dhaqaajisa biyaha tirada badan ee Badweynta Baasifigga. Dhacdooyinkaani waxay sababaan duufaanno daran oo kuleyl ah meelaha qaarkood sida Peru iyo abaaro ba’an oo ka jira meelo kale sida Hindiya. Intaa waxaa dheer, iyaguna way kiciyaan koror caalami ah ee heerkulka celceliska iyo isbeddelka qaababka roobka.
Sidaad u aragto, baddu waa nolosheena, waana sababta aan u ilaashanayno kuna ilaalinayno xaalad wanaagsan si aan annaga iyo noolaha nool ee ku nool iyo cimilada meerahuba u ahaano mid deggan oo xaalad wanaagsan ku sugan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Muhiimadda xuska Maalinta Badweynta Adduunka
Dheecaadda jinsiyeed mar dambe ma imaanayso xagaaga oo keliya
Supercélulas, oo ah muuqaal dabiici ah oo muuqaal laga duubay